Texas na -emechi ebe ndị na -agafe ókèala iji kwụsị mmụba ndị na -akwaga mba ọzọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Texas na -emechi ebe ndị na -agafe ókèala iji kwụsị mmụba ndị na -akwaga mba ọzọ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
N'elu àkwà mmiri dị na Del Rio, Texas, ihe karịrị ndị kwabatara 8,000 abanyela na US ma na -eche ugbu a ka ndị nchekwa ala US jidere ha.
Kọstọm na Nchedo oke US kwupụtara ụnyaahụ na ndị nnọchi anya ya zutere ndị kwabatara 208,887 na -ezighi ezi n'August, mmụba karịa 300% kemgbe Ọgọst 2020. Kwa ọnwa n'afọ a ka ọ hụla ọnụọgụ ndekọ nke nzute ma e jiri ya tụnyere otu ọnwa na 2020, 2019 na 2018, yana nde mmadụ 1.1 agafela oke iwu na 2021 ruo ugbu a.
Gọvanọ Texas nyere iwu ka emechie ebe niile na -agafe ókèala ndịda iji kwụsị iju mmiri nke ndị kwabatara n'ụzọ iwu na -akwadoghị na steeti ahụ.
Abbott kwupụtara na, n'adịghị ka Onye isi ala Biden, steeti Texas ka na -agbasi mbọ ike na -echebe oke anyị yana ichebe ndị America.
Gọvanọ Texas, Greg Abbott, wepụtara nkwupụta taa na -ekwupụta imechi ebe isii na -agafe ókèala steeti, “iji kwụsị ndị njem a (onye mbata na ọpụpụ na -akwadoghị) ịkagbu steeti anyị.”
Gọvanọ Texas Greg Abbott
Abbott, onye Republican kwuru na nkwupụta, "Nnukwu nleghara anya nke ọchịchị Biden ịrụ ọrụ ha na ichekwa ókèala ahụ bụ ihe jọgburu onwe ya."
"N'adịghị ka Onye isi ala Biden, Steeti Texas na -agbasi mbọ ike na nchekwa ókèala anyị na ichebe ndị America."
"Enyerela m Ngalaba Nchedo Ọha na Texas National Nche ka ndị ọrụ na ụgbọ ala mechie isi isii nke mbata na mpaghara ndịda iji kwụsị ndị njem a ịfufu steeti anyị."
Na àkwà mmiri mba ụwa na Del Rio, Texas, ihe karịrị 8,000 ndị njem abanyela na US ma na -eche ugbu a ka ejide ya Ndị US Border Patrol ndị uwe ojii, dị ka akụkọ Thursday si kwuo.
Ìgwè mmadụ ahụ mụbara okpukpu abụọ site na 4,000 ruo 8,000 kemgbe Wenezde, ebe ndị mmanye iwu kwuru na ọtụtụ bụ ndị Haiti.
Ọnụ ọgụgụ nke igwe mmadụ ahụ, ekwuola na ha agabigala ndị na -eche nche ókèala, nke, dị ka Abbott si kwuo, rịọrọ steeti Texas ka ọ banye ma mechie ụzọ.
Del Rio bụ naanị otu n'ime ụzọ iri abụọ na-agafe ebe dị n'akụkụ ókèala Texas na Mexico.
Ndị mbịarambịa na-abata na ngabiga ndị a nwere ike rịọ mgbaba ma ọ bụ gosi onwe ha na Border Patrol ka ejide ha wee tọhapụ ha na US, yana usoro ọchịchị 'njide na mwepụta' nke Onye isi ala Joe Biden weghachiri na mbido afọ a.
Na mgbakwunye, nchịkwa Biden akwụsịla trump'' Nọgidenụ na iwu Mexico '', nke chọrọ ka ndị mbịarambịa niile na -abata mee ihe mgbapu ma ọ bụ nkwupụta mbata ha site na Mexico wee chere ebe ahụ ruo mgbe edoziri azịza ndị a.
Biden gbanwekwara trumpIwu nke ịtụgharị ndị na-eme mkpọtụ ókèala n'oge ọrịa COVID-19, na-esepụta ihe na-erughi afọ 18, na-eduga n'ịwa ahụ ụmụaka na-esoghị na-eme njem site na Central America gaa US.
Agbanyeghị, dị ka data kọstọm na nchedo oke, imirikiti ndị na -enyocha oke na 2021 bụ ndị okenye.
US Customs na ókè-ala Nchedo mara ọkwa ụnyaahụ na ndị nnọchi anya ya zutere 208,887 ndị kwabatara n'ụzọ iwu na -akwadoghị na Ọgọstụ, mmụba nke ihe karịrị 300% kemgbe Ọgọst 2020. Kwa ọnwa n'afọ a, ahụla ọnụọgụ ndekọ nke nzute ma e jiri ya tụnyere otu ọnwa na 2020, 2019 na 2018, na nde 1.1 Ndị mmadụ agafela oke iwu na 2021 ruo ugbu a.
N'oge na -adịghị anya ọkwa ya, Gọvanọ Abbott wepụtara nkwupụta ọzọ na -ekwu na nchịkwa Biden enyela iwu ka ụzọ Texas ga -emeghe.
Abbott kwuru na ndị ọrụ nchekwa nchekwa ọha na ndị ọrụ nchekwa obodo ka ga -anọ ebe ahụ iji gbochie ụzọ gafere.
Ejiji ụwa: Ọrụ Taiwan na Sri Lanka na ...
Kedu ihe kpatara Spain ji egbochi nnukwu ohere maka ụwa ...
Princess Cruises Ụgbọ mmiri Emerald Laghachi n'oké osimiri
Obodo egwu kacha elu 10 n'ụwa
Fiji na -akwali imepe njem nlegharị anya na Disemba 2021
Njem nlegharị anya Seychelles nwere nchekwube n'anụ ahụ mbụ ya ...
Kedu onye ga -akwado UEFA Euro 2028?
COVID-19: Anyị niile nọkọ ọnụ, mana ụwa bụ ...
Nde mmadụ 13.3 ndị Europe bịarutere iji mee njem nlegharị anya Gulf ...
Onye odeakwụkwọ ọhụrụ India nke Ministry of Aviation ...
E jidere onye njem nlegharị anya America na Ukraine maka iyi ...
Nlekọta ego na-eme njem nlegharị anya na oge ntụrụndụ ...
Nnukwu ụgbọ elu dị mma ugbu a na A220-300